Inona no atao hoe IRA mivantana sy ny fomba hametrahana ny tsirairay
Ny IRA-Directed IRA dia kaonty fisotroan-dronono manokana izay manome safidy betsaka amin'ny fampiasam-bolanao mihoatra noho ny fahazoan-dalàna mpiambina IRA. Ny ankamaroan'ny mpiambina IRA dia banky na mpivarotra amin'ny tahiry. Ny fiara fitateram-bola izay manome tombony ho an'ny tenany ihany no avelany. Ny IRA mivantana dia manana mpiambina manome alalana anao hampiasa ny IRA amin'ny safidy malalaka malalaka ankatoavina amin'ny alàlan'ny kaody IRS.
Betsaka ny mpiasan'ny IRA no mamela ny fampiasam-bola amin'ny tahiry, ny fatorana, ny vola miaraka ary ny CD ihany. Ny mpiandraikitra IRA mitantana ny tenany dia mamela ireo karazana fampiasam-bola ho an'ny trano, fanamarihana, fametrahana manokana, taratasy fanamarinan-ketra ary maro hafa. Betsaka ny olona handray soa amin'ny endri-javatra a dia nitarika IRA IRA.
Misy ny tombony azo amin'ny fananana izany rafitra izany na maromaro ny LLC, toy ny fiarovana ny fananana sy ny fahafaha-manavotan'ny fampiasam-bola. Ity fandaharana ity dia manokana ho an'ireo izay tena te hifehy ny portfolio portfolio. Ny mpampiasa vola tahaka izany dia mety hampitombo ny tahan'ny fiverenany, mampihena ny sarany ary manome azy ireo ny fahafahana handray fanapahan-kevitra haingana amin'ny fampiasam-bola.
Tsy zava-baovao izany. Ny mpampiasa vola dia afaka nitari-tena mivantana ny volan'ny fampiasam-bolany ho safidiny amin'ny kianja voafantina ary manangona tombony tsy misy hetra nanomboka tamin'ny 1974. Tao anatin'ny 10 taona lasa izay, ny fitaovana fampiasam-bola mitantana ny tena dia nahazo ny fahafaha-milefitra farany, dia ny fananana sy fitantanana orinasa voafetra.
Mahazo tombony ny LLC: · Manome anao mifehy · fiarovana ny lalàna · tombony tsy misy hetra
* Ny IRA dia manana 100% an'ny LLC
** Tahaka ny IRA afaka mametraka vola amin'ny tahiry Apple ho takalon'ny saham-bola IRA tompon'ny saham-bola Apple, ny IRA dia afaka mametraka vola amin'ny alàlan'ny LLC ihany koa ho takalon'ny tombontsoa ho mpikambana ao amin'ny LLC.
*** Raha tsy izany dia tompon'antoka amin'ny hetra ny tompon'ny LLC. Satria ny tompon'ny LLC dia IRA, tsy mitombo ny hetra.
Manokàna IRA vaovao mivantana, ary avelao ny asan'ny IRA Limited Liability Company amin'ny asa matihanina
Ampidiro amin'ny kaonty vaovao misy ny fisotroan-dronono ireo vola misy
Manamboara LLC vaovao izay alain'ny IRa vaovao (izay manana fifanarahana miainga manokana)
Arotsaho ao amin'ny kaontin'ny bankin'ny LLC ny alàlan'ny banky IRA
Laharana taratasy fanamarinana mahaliana momba ny mpikambana ao amin'ny IRA
Miaraka amin'ny format eto ambony dia afaka mampiasa vola amin'ny fisotroan-dronono ianao. Mora amin'ny fanaovana sonia. Ity dia manokatra varavarana maro ahafahan'ny fampiasam-bola, toy ny trano sy volamena ary orinasa mitokana. Ny zavatra rehetra takian'ny IRS / DOL dia ny mifanaraka amin'ny LLC rehetra. Fanampin'izany, mila manao fampindramam-bola ankatoavina ianao. Ohatra, tsy afaka mividy ara-dalàna trano fialan-tsasatra ianao amin'ny alàlan'ny IRA LLC ary fialan-tsasatra ao. Tsy misy miainga ny tena. Ohatra, tsy afaka mividy trano ara-dalàna na fananana hafa amin'ny tenanao izay efa ananananao ianao. Na dia misy aza ny fanavahana, natao ho an'ny fampiasam-bola ara-dalàna ireo fitsipika ireo. Jereo toro-làlana IRS.
Ampiasao ny isa eo amin'ity pejy ity na taratasy fangatahana hanatrarana ny zavatra ilainao amin'ny mpanolo-tsaina iray.
Inona no azon'ny atao amin'ny alàlan'ny IRA LLC?
Raiso fanapahankevitra momba ny fampiasam-bola haingana: Ny fividianana fananana foreclosed trano dia ohatra mahazatra amin'ny famatsiam-bola hafainganana amin'ny boky. Azonao atao ny mandray andraikitra ara-bola nefa tsy misy mpiambina niambina ny dingana na manakarina saram-bola.
Marina tokoa, fampielezana ara-dalàna ny fampiasam-bolanao: azonao atao ny mampihatra ny volanao fisotroan-dronono ho an'ny tombontsoa betsaka tsy misy hetra. Ohatra, ny LLC anao dia afaka manamboatra fampindramam-bola fohy na maharitra ela amin'ny trano fisavana, fiara na orinasa, ary manakarama avo kokoa noho ny andrim-panjakana fampindramam-bola mahazatra.
Mitahiry vola ary manara-maso akaiky: Afaka mividy trano manofa ianao, avy eo ampidino ny momba anao sy ny fitantananao azy, ka misoroka ny vidin'ny fitantanana fananana.
Malalaka ianao manoratra taratasim-bola amin'ny kaontin'ny banky LLC anao amin'ny fampiasam-bola nofidinao raha tsy ekena ny fahazoan-dalana amin'ny alàlan'ny fankatoavana, ny fijerena ny saram-barotra na ny saram-barotra vokatry ny fitaovana fampiasam-bola fisotroan-dronono mora indrindra miaraka amina fotoana bebe kokoa, fifehezana, fiarovana ary matetika kokoa - mety ho fivoarana lehibe kokoa .
Arovy ny IRA amin'ny fisaraham-panambadiana
Betsaka ny olona miahiahy momba ny miaro ny IRA amin'ny fisaraham-panambadiana. Rehefa mametraka drafi-piarovana fananana ho an'ny olona mandinika ny fisaraham-panambadiana isika dia izao no ataontsika. Voalohany dia nanangana IRA mivantana izahay. Avy eo ny mpanjifa dia mamindra ny fananana avy amin'ny drafitra ankehitriny mankany amin'ny mpiambina IRA mitarika. Nanangana Wyoming LLC izay fananan'ny IRA izahay. Ny mpanjifana dia mangataka ny mpiambina IRA mivantana hampiasa ny IRA miditra ao amin'ny Wyoming LLC. Ny IRS dia mamela ny iray hampiasa vola amin'ny orinasa iray tsy miankina. Ny ankamaroan'ny mpiambina dia tsy mamela ny fifanakalozana toy izany satria tsy afaka manefa anao ny vaomiera amin'ny fizarana entana amin'ny fanaovana izany.
Manaraka, nametraka fitokisana any ivelany izahay fa misy ampahany roa. Ny ampahany A dia ho an'ny fananana tsy misotro ronono. Ny ampahany B dia ho an'ny fananana fisotroan-dronono. Ny ampahany dia manana LLC offshore LLC. Ny ampahany B dia manana LLC hafa amoron-dranomasina. Ny mpanjifa, toy ny sonia ao amin'ny Wyoming LLC, dia mandoa ny vola amin'ny offshore LLC izay ao anatin'ny ampahany amin'ny fisotroan-dronono. Ny IRA no mpahazo ny tombotsoan'ny ampahany amin'ny fisotroan-dronono. Rehefa misy ny fanafihana ara-dalàna, dia miaro ny fananana ny orinasan'ny lalàna any ivelany isika. Ny fitsarana eo an-toerana eo an-toerana dia tsy manana fahefana eo amin'ny sehatry ny lalàna any ivelany. Araka izany, mijanona ho azo antoka sy voaro ihany ny fananana. Mijanona eo ambanin'ny pay payara misotro ronono ny fananana, noho izany dia mijanona ny tombontsoa momba ny hetra.
Ity misy sary teks an'ny fomba iarovana ny IRA amin'ny fisaraham-panambadiana. Vola ho an'ny mpiambina IRA amin'izao fotoana izao .—-> To custodian Directed. -—> Nangataka ny mpiambina IRA mivantana ianao fa hampiasa vola ao amin'ny Wyoming LLC izay mitantana ny IRA (ny alàlan'ny mpitari-dalana manokana dia tsy handefitra any ivelany). ——> Ianao, satria sonia ao amin'ny Wyoming LLC dia nametraka ny vola ho ao amin'ny kaonty amoron-dranomasina izay notazonin'ny Nevis LLC. Ny Nevis LLC dia ny ampahany amin'ny fisotroan-dronono amin'ny fitokisanao any ivelany. —-> Azonao atao ny mampiasa ny vola arak'izay tianao ao amin'ny kaontin'ny banky Nevis LLC.
Ny mekanika momba izany dia tena tsotra. Ianao mihitsy no mitantana ny IRA ankehitriny mba hampiasanao fampiasam-bola any amin'ny LLC natokana ho an'ny lalamby. Ny IRA dia manana zana-bola zato isan-jaton'ny orinasa iray tantaninao izay mampiasa ny vola fisotroan-dronono. Vitsy ny fetra ary saika ny fifanarahana voarara rehetra dia ny famerenam-bola miaraka amina antoko mifandray; fety mifandraika amin'izany dia ianao sy ny fianakavianao akaiky. Jereo ny Fitsipika IRS ho famaritana marina. Saika ny fampiasam-bolan'ny sandrin'ny fitaovam-piadiana rehetra dia ho ara-dalàna ary misy ihany koa ny alalana ara-dalàna azo atao. Miresaha amin'ny mpanoro hevitra momba ny hetra na licence momba ny toe-javatra misy anao amin'ny antsipiriany bebe kokoa. Ankoatr'izay, ny mpiambina IRA mitantana anao dia afaka manampy amin'ny fitarianao anao.
Ny fametrahana IRA LLC dia fifanakalozana fifanakalozana maro; aloha dia mila IRA mitantana. Avy eo dia tarihinao ny mpiambina ny varotra IRA hampiasa vola amin'ny LLC vaovao. Manokatra kaonty banky ho an'ny LLC ianao. Farany ianao dia mamatsy vola ny IRA LLC. Rehefa nahavita izany rehetra izany ianao dia afaka manomboka mampiasa fampiasam-bola mivantana amin'ny kaonty fisotroan-dronono.
Ilaina ny manelingelina fa hitantana ireo entana rehetra ireo amin'ny filaharana mety. Izany hoe mila ataonao azo antoka fa namboarina ho an'ny IRA ny fifanarahana rehetra sy ny antontan-tarika. Ankoatr'izay dia mila mandoa ny vola manontolo ny IRA. Raha ny tompon'ny IRA no mandoa vola amin'ireto, dia mety ho mpivarotra voarara ny kaonty iray. Ny sisintany IRS momba izany dia voafaritra miaraka amin'ny fiantraikany ratsy amin'ny fianjerana amin'ny sisin-dàlana misy ireo tsipika voarara. Ny zava-dehibe indrindra dia ny matihanina matihanina za-draharaha mitarika ny fizotranao miaraka amin'ny tari-dalan'ny mpisolovava na mpanoro hevitra momba ny hetra.
Ny fananganana IRA LLC dia ahitana ireto manaraka ireto:
LLC Anarana Manamarina sy Famandrihana ao anatin'ny Fanjakana voafidinao
Fanomanana sy fandrafetana ireo andininy momba ny fampidirana
Ireo antontan-taratasy nofenoina tamin'ny fanjakana nofantenanao
Rakitra fonosana naterina tamin'ny alàlan'ny laharam-pahamehana
Checklist Corporation tena ilaina
Fametrahana rakitra haingana
Nomeran'ny ID ID Tax
Fanasokajiana fandraisana andraikitra (hetra)
IRA LLC kaonty fizahana orinasa
Fanampiana amin'ny fametrahana ny kaonty fizahana orinasa vaovao ho an'ny LLC vaovao namboarina
Ny famatsiam-bola ny IRA LLC dia ahitana ny dingana manaraka:
Fanokafana kaonty banky vaovao ho an'ny IRA LLC
Ny famoahana ny fahalianan'ny mpikambana amin'ny IRA mivantana
Ny fankatoavana ny fifanarahana miasa
Adidin'ny tompon'andraikitra LLC
Ny fankatoavana ny antontan-taratasy sy ny fifanarahana rehetra
Famindrana ny vola IRA
CATETANA: Ireo fomba fanao dia tsy tokony hitranga raha tsy misy fanampiana matihanina.
Antsoy ny isa eto amin'ity pejy ity na ampiasao ny fangatahana mba hahazoana fanampiana.
Ny orinasa manokana notendren'ny IRA LLC dia toerana izay nividianan'ny tenany manokana ny IRA, na orinasa, orinasa vaovao ary amin'ity tranga ity dia orinasa tsy miankina. Ny orinasa mitantana ny IRA dia manana ny orinasa tsy miankina rehetra, ary ianao tompon'ny IRA, mitantana ny orinasa vaovao. Ity sefom-pandraharan'ity LLC ity dia manome fanaraha-maso ny taratasim-panamarinana ary manokatra ny karazam-panazavana rehetra mety ho an'ny vola fisotroan-dronono. Manao ny kaontinao IRA ianao ny tompony (tompony) ao amin'ny LLC ary hanendry mpitantana orinasa afaka mahazo onitra ho an'ny serivisy. Ny tompon'andraikitry LLC dia mitantana ny hetsika isan-kerinandro, toy ny fanatanterahana fifanarahana, famatsiam-bola ary fanasonia fanamarinana araka ny toromarika. Zava-dehibe ny mitady ny fanampian'ny mpahay matihanina iray momba ny fomba fametrahana ny LLC sy ny drafitra fitantanana ny IRA.
Misy fitsipika, fombafomba sy fitsipika izay tokony arahina, indrindra indrindra amin'ny voalohany rehefa mametraka ny orinasanao manokana IRA LLC. Voalohany indrindra, ny IRA anao manokana dia hividy ny orinasa ao amin'ny LLC, izay midika fa tsy maintsy efa napetraka ny IRA, avy eo ianao dia mandefa ny volanao amin'ny fisotroan-dronono ao amin'io orinasa vaovao io.
Olona maro no tsy mifidy ny hametraka ny tenany manokana IRA LLC, izy ireo dia manatona mpandraharaha iray amin'ny sehatry ny antotan-taratasy momba ny lalàna hiomanana sy hametraka ny fananganana azy ireo.
Ny fananganana orinasa manokana notendren'ny IRA dia tsy maintsy atao arakaraka ny fomba fanao mba hisorohana ny fahasarotana amin'ny ho avy. Zava-dehibe ny fananganana ny orinasanao sy ny fisotroan-dronono momba ny fampiasam-bola amin'ny fametrahana sy ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny fanitsiana fifanarahana fifanarahana fiaraha-miasa. Azo atao ny mandrara ny fifampiraharahana raha toa ka tsy misy ny orinasa IRA na ny orinasa mikarakara azy. Ny fifanakalozana voarara dia ny tendron'ny Achilles amin'ny fambolena saram-piaramanidina ambany kokoa sy ny tombony amin'ny fampiasam-bola. Raha toa ka miaina ao anaty mikrôskopa ny orinasanao IRA, dia tsara foana fa ny fandaminana sy ny fanabeazana no marina. Ny vidin'ny serivisy IRA LLC dia nomena anarana mba hisorohana ny fahasarotan'ity karazana ity.
Ny fifandraisana dia voafetra ho an'ireo izay mahasoa ny fisotroan-dronono ary tsy eo anelanelan'ireo antoko tsy mety. Voafetra vetivety eto ambany, ho an'ny besinimaro, jereo ny antontan-taratasy IRS amin'ny antoko tsy voamarina;
Ny tompon'ny IRA na ny vadin'ny tompony
Ny fianakavian'ny mpampiasa IRA, ray aman-dreny, sns
Fikambanana iray izay mihoatra ny 50% izay tompon-trosa iray
Ny tompon'ny 10%, ny manamboninahitra, ny talen'ny orinasa na ny tompon'andraikitra iray dia tompon'antoka amin'ny olona tsy mety
Mpandresy amin'ny IRA
Izay manolotra asa ho an'ny IRA
Ity ambany ity ny lisitr'ireo fifanakalozana voarara ary zavatra hafa izay tsy azonao atao amin'ny orinasam-panjakana IRA:
Ampidiro ao amin'ny trano iainanao ankehitriny ny vola fisotroan-drononoo
Fandraisana anjara amin'ny fampindramam-bola amin'ny fisotroan-dronono
Fandefasana ny fananana manokana ho an'ny IRA
Fanararaotana vola ho an'ny olona tsy mety
Mamoaka ny saram-panananao
Tsy misy ilàna ny fampindramam-bola mandrara ny fampiasam-bola tsy misy fetran-dàlana izay omena ny IRA LLC. Raha mifehy ny vola fisotroan-drononony ianao, ny orinasa IRA LLC dia ny fiara fitaterana ambony fisotroan-dronono ho an'ny olona izay maniry ny fahasamihafan'ny farany.
Ny Real Estate dia raharaha goavana amin'ny fampiasam-bolan'ny fisotroan-dronono sy ny IRA LLC. Afaka mandray fanapahan-kevitra haingana ianao toy ny asa amin'ny fivarotana fohy ary afaka manangona tombombarotra ho an'ny tombotsoa azo avy amin'ny fisotroan-dronono.
Ahoana ny fampiasana azy
Eto ianao dia afaka mandeha amin'ny ohatra iray momba ny fomba ampiasain'ny IRA LLC ho an'ny tahan'ny fitomboan'ny vola fisotroan-dronono. Ahoana ny fampiasana IRA LLC.
Manana $ 150,000 ao amin'ny kaonty IRA ianao ary manapa-kevitra fa te-hampiasa ireo vola ireo ho any amin'ny trano izay azonao amin'ny alàlan'ny famelomana mialoha. Noho izany, mamorona LLC ianao miaraka amin'ny fifanarahana iray fanaovana lisitry ny mpikambana tokana ho kaontinao IRA. Manaraka, hametraka kaonty banky ho an'ny LLC ianao ary hampianaro ny mpikarakara IRA anao handefa ny $ 150,000 ao amin'ny kaonty banky LLC.
Miaraka aminao ny orinasa IRA LLC izay voalamina tsara sy voaaro anao, dia afaka mitsambikina avy hatrany ianao ary manamboatra ny vidim-panavotana. Mandany $ 120,000 ianao ary mahazo trano efatra, izay hividy sy hiantsoana ny orinasa izay manana ny IRA anao. Manofana ny trano tsirairay mandritra ny taona vitsivitsy ianao ary ny fandaniana, ny hetra, ny fiantohana ary ny fikojakoana dia aloan'ny orinasa mampiasa ny kaontin'ny bankin'ny LLC. Ny fidiram-bola dia alefa mivantana mankany amin'ny LLC. Satria ny LLC dia tompon'ny IRA, ny tombom-barotra dia tsy manan-kialofana. Ho an'ny tombontsoa azo avy amin'ny haba, ny orinasa izay ao anatin'ny IRA dia afaka mividy trano, volamena, tahiry na zavatra hafa mba hampitombo ny fahasamihafana amin'ny portfolio'ny fisotroan-dronono.
Raha toa ny tsirairay amin'ireo saran-drakitra famindram-bola amin'ny $ 500 amin'ny volan'ny vola dia midika fa ny 16% hampitombo ny vola miditra. Rehefa vonona ny hivarotra ireo trano ianao dia hanaisotra ny fananana ary ny IRA dia afaka mahazo vola maimaim-poana. Mivarotra ny tokantranonao ho an'ny $ 200,000 izay alefa mivantana any amin'ny kaontin'ny bankin'ny LLC. Ny voalohany $ 150,000 dia nitombo ho $ 272,000.
Fitsipika ankapobeny ho an'ny tompon'ny IRA LLC
Ahoana no hialana amin'ny fifanakalozana voarara? Ny tompon'ny orinasa IRA, ny fianakaviany, ny vady aman-janany dia tsy tokony:
Mandray fananana na fizarana avy amin'ny orinasa IRA.
Mandray soa na mampiasa ny fananan'ny IRA.
Aloavy ny fandaniana.
Vola be avy amin'ny IRA.
Hanome tolotra, na hanonerana, na ho an'ny orinasa IRA.
Raha toa ka mijery ny fampiasam-bola ny tsy fisian'ny arm, dia tokony hifampidinika amin'ny mpanolontsaina mahafeno fepetra. Misy fomba maro azo atao ny mandrara ny fifanakalozana, ny ankamaroany dia ny fampifangaroana asa sy ny fandaniana amin'ny fananana IRA LLC. Raha tsy azonao antoka, mangataha CPA na mpampianatra mahafeno fepetra. Ny hetsika ataonao ihany no mahazo alalana.
Maro ny tompon'andraikitra IRA hahatakatra rehefa mamorona ny LLC. Izy io dia tetikasam-pandraharahana manokana izay mitaky fitandremana tsara. Ny fifanarahana momba ny fifanarahana, ny sata hetra, ny rafitra tompony, ny fikarakarana ara-drariny rehetra dia mila fepetra IRA manokana. Fikambanana iray azo itokisana no tokony hametraka izany ho anao.
Ny IRA Real Estate dia mamela ny tompona kaonty fisotroan-dronono mba hividy trano amin'ny hetra, tsy misy hetra. Azonao atao ny mividy trano faran'izay haingana araka ny fanoratana taratasim-bola ary ny fampiasam-bolanao dia tsy ekena amin'ny fahazoan-dalàna amin'ny alalàn'ny mpiambina na ny saram-barotra. Azonao atao ny mampihena ny fandoavam-bola ary mahazo fampindramam-bola tsy tratran'ny trano raha te hampitombo ny fitomboan'ny fampiasambola. Ny fananganana LLC iray ho an'ny plan Iraisam-pirenena Iraisam-pirenena IRA dia afaka mamonjy sy mahazo vola an'arivony dolara ianao raha oharina amin'ny fampiasana mpiambina IRA mivantana. Izany dia satria afaka mametraka orinasa any amin'ireo orinasa tsy amidy am-pahibemaso ianao, tsy afaka ny vaomiera, toy ireo orinasa tompon'andraikitra voafetra. Plus ianao dia afaka mampiasa ny LLCs fampiasanao hividianana trano sy varotra hafa.
Ny IRA LLC izay tarihin'ny tenany manokana dia nanjary fitaovana fampiasam-bola ho an'ny fividianana trano fananana amin'ny ampahany amin'ny fisotroan-drononon'ny tsirairay. Ny fametrahana solonanarana iray tarihin'ny IRA LLC dia mamela anao hanapa-kevitra ny amin'izay hampiasanao ny volanao. Azonao atao ny mifehy ny bokikely LLC. Ny fampiasam-bola izay misy anao dia ny tranona trano, trano rihana, tetik'asa fanorenana, trano fonenana, mba hanonona anaran'olona vitsivitsy fotsiny. Azonao atao ihany koa ny mividy naoty, haba, vola haba, fananana vahiny na tranom-panjakana amin'ny fampiasanao ny tenanao manokana IRA LLC.
Miaraka amin'ny orinasa IRA anao manokana, azonao atao:
Manaova tahiry avy hatrany - mampiasà vola amin'ny sehatra tsy miankina, fananana hetra na fanolorana manokana.
Aoka ho mpitantana ny entam-barotra (miara miasa amin'ny orinasa), ary tehirizo amin'ny fandaniana ary mitazona ny fanaraha-maso feno amin'ny fampiasanao (azonao atao ny mahazo toro-hevitra momba ny hetra).
Mividiana trano fisotroan-dronono any amin'ny tsenam-barotra amin'izao fotoana izao - manofa azy mandra-pivoakanao, ary raiso ho toy ny fisotroan-dronono
Manoro hevitra ny LLC ny manam-pahaizana noho ny halehibeny ary mandrindra ny fiarovana amin'ny fiarovana. Na izany aza, raha te hampiasa vola amin'ny fisotroan-dronono ho an'ny fananana tokana mandritra ny fotoana lava be ianao, dia tsy ilaina ny fandaniana fanampiny sy ny fikarakarana ny orinasa IRA.
Ampiasao ireo mpanolo-tsaina manam-pahaizana manokana hitarika anao amin'ny alàlan'ny dingana - mitandrema foana fa tsy voarara ny fifanakalozana. Manangana orinasa manana traikefa matihanina. Avy eo, tehirizo ny torohevitry ny mpisolovava iray manan-kaja sy ny kaonty. Ny mpisolovava dia afaka manome anao antontan-taratasy milaza fa raha ara-dalàna na ara-dalàna ny fifampiraharahana, Ny kaonty dia afaka manampy anao hahazo antoka fa takin'ny hetra ianao.
Tetik'asa matanjaka ara-bola IRA:
Ny solontenan'ny IRA vitsivitsy ihany no hamela ny fampiasam-bola amin'ny fampindram-bola mivantana ao amin'ny IRA. Noho izany, ny Real Estate IRA anao dia mamela anao handray fanapahan-kevitra sy hanao asa haingana, ka hanome anao ny tena tanjom-piainana.
Ny vola azo avy amin'ny fivarotana fananan-tany sy ny tombom-barotra dia naverina hetra amin'ny IRA nentim-paharazana na ny tsy manan-kialofana ao amin'ny Roth IRA tahaka ny fampiasam-bola hafa.
Afaka manana fanaraha-maso ny fananana trano misy anao ianao.
Ny Real Estate IRA dia afaka mampiasa ny volan'ny IRA mba handoavana ny vola sy ny fividianana trano ao amin'ny haingon-tsakafo.
Ny minisitera miandraikitra ny fiantohana ara-bola IRA hatramin'ny fanaraha-maso ny fifanakalozana.
Satria ny orinasa dia manana orinasa ao amin'ny LLC, ny harena dia voaro amin'ny lalàna ary misaraka amin'ny vola hafa IRA sy avy amin'ny fananana manokana.